Reflow မီးဖို, Pick ထိုအရာဌာနစက်, Rework ဘူတာ, Smt စက် - Puhui
အနီအောက်ရောင်ခြည် Reflow မီးဖိုကို T-937
အနီအောက်ရောင်ခြည် Reflow မီးဖိုကို T-937M
တစ်ဦး Features ။ ဤသည်မီးဖိုဂဟေဆက်ကောင်းကောင်း paste leadfree ။ ခ။ ဤသည်မီးဖိုလှိုင်း data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲ / save / လွယ်ကူသော input ကို / set ကို / ထုတ်လွှင့်ရန် / ညှိ, PC နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ က c ။ အတော်များများကအမျိုးမျိုးလွယ်ကူသော set ကိုလှိုင်းရန်, ထိန်းချုပ်ဆော့ဖျဝဲထဲမှာ input ကိုစတိုင်လ်ကိုချီလွှဲ။ ဃ။ ထိန်းချုပ်မှု software ကိုအလိုလိုချီလွှဲပြသ, သော graphical display ကိုနှငျ့အတူရှိ၏။ အီး။ ထိန်းချုပ်မှု software ကိုလွယ်ကူပါတယ် / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလှိုင်းလုံး data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲ / ကယ်ဖို့, လှိုင်းပုံနှိပ် function ကိုနှငျ့အတူရှိ၏။f။ ထိန်းချုပ်မှု software ကိုငါးပိဒေတာအတွင်းပိုင်း၏ 299 မျိုးနှငျ့အတူရှိ၏။ ဆ။ တည်ငြိမ်ပြီးမြန်နှုန်းမြင့် MCU တစ်ချမှတ် ...
အနီအောက်ရောင်ခြည် Reflow မီးဖိုကို T-962
ဖော်ပြချက်အဆိုပါအနီအောက်ရောင်ခြည် IC အပူပေးစက် T962 reflow-မီးဖိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာသည်။ ဒါဟာထိရောက်စွာအမျိုးမျိုးသော SMD နှင့် BGA အစိတ်အပိုင်းများ soldering အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ မြေတပြင်လုံးဂဟေလုပ်ငန်းစဉ်အားအလိုအလျှောက်ပြီးစီးနိုင်ပြီးဒါဟာအလွန်လွယ်ကူသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစက်ပူလေကြောင်းစီးဆင်းမှုတစ်အစွမ်းထက်အနီအောက်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်စောင်ရေကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်အပူချိန်အလွန်တိကျမှန်ကန်ထားရှိမည်နှင့်အညီအမျှဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည်။ ပြတင်းပေါက်အံဆွဲအလုပ်-piece အကိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂဟေနည်းစနစ်များနှင့်ကြိမ်မြောက်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ် ...
အနီအောက်ရောင်ခြည် Reflow မီးဖိုကို T-962A
ဖော်ပြချက်အဆိုပါအနီအောက်ရောင်ခြည် IC အပူပေးစက် T962A reflow-မီးဖိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာသည်။ ဒါဟာထိရောက်စွာအမျိုးမျိုးသော SMD နှင့် BGA အစိတ်အပိုင်းများ soldering အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ မြေတပြင်လုံးဂဟေလုပ်ငန်းစဉ်အားအလိုအလျှောက်ပြီးစီးနိုင်ပြီးဒါဟာအလွန်လွယ်ကူသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစက်ပူလေကြောင်းစီးဆင်းမှုတစ်အစွမ်းထက်အနီအောက်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်စောင်ရေကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်အပူချိန်အလွန်တိကျမှန်ကန်ထားရှိမည်နှင့်အညီအမျှဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည်။ ပြတင်းပေါက်အံဆွဲအလုပ်-piece အကိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂဟေနည်းစနစ်များနှင့် t ကိုခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ် ...
အနီအောက်ရောင်ခြည် Reflow မီးဖိုကို T-962C
channel Reflow မီးဖိုကို T-960
channel Reflow မီးဖိုကို T-960E
1.2 နဲ့ LED Chip Mounter MT-602L
1.2 နဲ့ LED Smt စက် MT-602 ဥ Features ...
မြင့်မားသော Precision ပရင်တာ
BGA တွေမှာ IrDA နေရာကိုဂဟေဆော်လုပ်ငန်းကို T-835
အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလက်ကျင်းပဆီမီးခွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ်ပေးရန် 1. ...
BGA Rework ဘူတာကို T-862
BGA Rework ဘူတာကို T-870A
ထုတ်ကုန်အနီအောက်ရောင်ခြည်ဂဟေ techno ်ပေးရန် 1. Features ...
BGA Rework ဘူတာကို T-890
ထုတ်ကုန်များ 1. ဒီစက်ကိုပု stron ရှိပါတယ် Features ...
hot ပြားကို T-946
ထုတ်ကုန်များ 1. မွေးစား MCU နှင့်အဆင့်မြင့် PI Features ...
Preheating ပြားကို T-8120
ကုန်ပစ္စည်းများ 1.The စက်ကတော့အပေါ်ကရွေးချယ် Features ...
Preheating ပြားကို T-8280
Ltd. , Tai'an Puhui လျှပ်စစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်, (Abbr: Puhui နည်းပညာ) Puhui Techology Smt စက်, Multitemperatual ဇုန် Reflow ဂဟေဆက်, Desktop ကို Reflow ဂဟေဆက်, Infrared အတွက်အာရုံစူးစိုက်တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် 2007 ခုနှစ်ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်၏ Tai'an ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည် BGA Rework ဘူတာနှင့် Hight-Precision ပရင်တာ။ ဤမြေကွက်၌နာမည်ကြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်, "puhui" မြင့်သောအသိအမြင်ရှိပြီး dometic နှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်အတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်။
အလိုအလျောက်အခမဲ့ Reflow မီးဖို Lead , ခဲအခမဲ့ Reflow မီးဖို , ဂဟေစက် , အသေးစား Reflow မီးဖို , Infrared Reflow မီးဖို , Smt Reflow မီးဖို ,